Otu esi eme Testosterone Cypionate Site na steroid Powders
/blog/Testosterone cypionate/Otu esi eme Testosterone Cypionate Site na steroid Powders
Ihe na 09 / 22 / 2017 by Dr. Patrick Young dere na Testosterone cypionate. O nwere 2 Comments.
N'akụkụ ahụ na-arụ ọrụ, a na-ere ahịa steroid-Testosterone Cypionate ntụ ntụ, Nke na-enyere aka ịzụlite ahụ ike na ike ọkpụkpụ, na-ejikwa maka abụba abụba na enwe mmekọahụNdị mmadụ na - azụkarị ngwaahịa Testosterone Cypionate site na ụlọ ahịa na ntanetị zụta steroids raw ntụ ntụ n'ihi ọnụ ala dị ala ma ọ bụghị usoro ịmepụta ihe siri ike. Taa anyị nọ ebe a ịkọ ụzọ dị mma iji mechaa Testosterone Cypionate ntụ ntụ.
Anyị na-ewere Testosterone Cypionate ntụ ntụ 100 mg / ml maka atụ.
Onye ọ bụla ML nke 100 mg / mL ngwọta nwere:
Testosterone Cypionate ntụ ntụ ....................................................................... 100 mg
Benzyl benzoate ...................................................................................... 0.1 mL
Osisi owuwu ......................................................................... 736 mg
Benzyl mmanya (dika nchekwa) .......................................................... 9.45 mg
Nri (ọ bụla ọ bụla)
Vialile Glass Vial (Nke ọ bụla)
Akara akpịrị na-atụgharị na 0.01g
Na-ebute Testosterone Cypionate n'ime iko bekee dị ka egosiri n'elu, tinye Benzyl mmanya na Benzyl Benzoate.
Nke abuo - Ihe ngbochi ahụ ga-amalite ngwa ngwa ma kpochie ntụ ntụ ma iji mee ka usoro ahụ dị ngwa ọ ga-ekwe omume iji saa mmiri.
Debe vial ahụ n'ime mmiri ole na ole n'ime mmiri ma ọ bụ ihe yiri ya: ọ dị mkpa ka ị ghara iji mmiri nke dị oke ọkụ n'ihi na nke a ga-eme ka ụfọdụ ngwaahịa na oxidize-150f bụ ezigbo okpomọkụ iji mee, mmiri a na-edozi ya na mmiri . Mkpụrụ mmanụ ahụ kwesịrị ịdị otu okpomọkụ dị ka ihe ngwọta mgbe ọ gbakwunyere ya ma ọ bụrụ na ị kpoo ihe ngwọta na mmiri ịsa mmiri, ị ga-abụkwa otu ihe ahụ na mmanụ ụgbọ.
Ntuziaka zuru ezu maka Nandrolone Ester (DECA Durabolin)
Ebumnuche nke a bụ nanị iji kpochapụ ntụ ntụ ahụ n'ime ihe mgbaze. E kwesịghị inwe "Egwú mmiri" ma ọ bụ ntụ ntụ ọ bụla a na-ahụ anya na ngwọta ma ozugbo a ga-eme nke a, aga n'ihu na nzọụkwụ ọzọ.
Ekem-Tinye mmanụ a na-agbanye mmanụ ọkụ na-edozi ahụ maka ngwọta
a ghaghị itinye 736ml a. Gwakọtara nke ọma, enweghi mgbapụ hormone-ozugbo nke a na-ewepụ ngwa ngwa site na mmiri bat wee gaa na nhazi usoro.
N'elu: Akpụkpọ ụkwụ steroid na-agbaze kpamkpam n'ime ihe mgbaze, mmanụ mmanụ na-agbakwunye na ngwaahịa ahụ dị njikere idozi ya.
Ọzọ - Chọpụta ihe ngwọta n'ime sirinji ị ga-eji nzacha
nke a nwere ike ịbụ otu sirinji buru ibu ma ọ bụ nke a nwere ike ime ugboro ugboro na obere sirinji. Wepu ntanetị syringe 0.22um na-enweghị isi site na nkwụnye ya ma doziee agịga akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na obere akụkụ ma tinyezie sirinji ahụ.
Ghichapu elu vial ahụ na-abaghị uru na mmanya mmanya na-egbu egbu ma tinye anụlị na-acha akwụkwọ ndụ n'ime ya, tinye nịnye a na-etinye na nnu sirinji n'ime vial dị ka egosiri n'okpuru:
Notes: Akara nke abụọ na-emetụta nrụgide dị ka ihe ngwọta na-abanye na vial ahụ. Mee ka nrụgide dị na syringe na ntin na ngwakọta. Nke a bụ akụkụ kachasị mkpa nke usoro a dum dịka ọ bụ ihe sterilize ngwaahịa gị. Ngwurugwu zuru ezu nke steroid ọ bụla ga-aga site na usoro a.
Mgbe ụfọdụ, otu onye nwere ike ịchọpụta na nkwụsị na-egbochi ma ọ bụ na usoro ahụ na-ebelata ngwa ngwa-ọ na-anabata ya iji dochie ntụgharị ahụ ma ọ bụrụ na nke a emee iji chekwaa oge. Oge ọ na - ewe iji nyocha ndị steroid dabeere na which steroid ntụ ntụ a na-edozi ya na ihe ole na-echegharị, yana mg / ml nke ngwaahịa ahụ.
N'ikpeazụ-- Mgbe a na-agbanye ngwaahịa ahụ na vial na-adịghị ọcha, usoro ahụ zuru ezu. Mgbe ahụ i nwere ike ịmalite iji.
Ọ dị mfe nghọta?
zhang, eze03 / 15 / 2018 na 1: 29 am
Dịka nkọwa gị, mmanụ ahụ na-ama jijiji ma ọ bụ igwe ojii mgbe ị dọpụtara ya na mmiri na n'ime vials. Isi ihe kpatara ya kwesịrị ịbụ maka ihe abụọ:
1. E nwere mmiri ma ọ bụ mmiri na mmiri ma ọ bụ vials. Mmiri mmiri na mmanụ ga-agbanye nsogbu dị otú ahụ.
Ngwọta: Iji mepụta mmanụ maka oge 5-10. ọnọdụ okpomọkụ na nkwụsị 100 agaghị eme ka nyocha nke ule dị irè. Mgbe ahụ, iji jide n'aka na mmiri na vial na-akọrọ, tupu ị jiri ha.
2. Ebee ka i si? Ọ bụrụ na ọnụ ụlọ ụlọ gị dị oke oyi, ule E / Cyp / p nwere ike ịpụpụta ya na mmanụ ma ọ yiri igwe ojii ma ọ bụ milky.
Na, ị na-eji BB maka ịkwa mmanụ?
Ọ bụrụ na ịnwere ike ịkekọrịta uzommeputa gị, ọ nwere ike inye aka.
Brew03 / 14 / 2018 na 1: 32 pm
Hello .. I have a question .. i tried to brew it.many times in different ways .. but my probldm is .. it becomes milky or cloudy when i pull up the finished testo E m syring wee pịgharịa ya na kedu ihe kpatara ya? Ana m agwakọta 250mg / ml ..
Ngwurugwu Steroid na iwu: Iwu ma ọ bụ iwu na-akwadoghị	Kedu ihe bụ yohimbine na otu esi arụ ya?
Gestonorone acetate ntụ ntụ (31981-44-9)
Masteron Enanthate (Drostanolone) ntụ ntụ